Whitening Your Teeth | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
पोस्ट ट्याग "आफ्नो दाँत दांत"
यी सजिलो संग तपाईंको दाँत सेतो
तपाईं आफ्नो दाँत दांत बारेमा विचार तर सधैं प्रक्रियाको बारेमा cynical थिए भने र निश्चित थिए जहाँ सुरु गर्न, तपाईं पढ्न आवश्यक. के तपाईं दाँत प्रक्रियाहरु दांत बुझ्न मद्दत गर्न यस लेखमा सुझाव विभिन्न पाउनुहुनेछ, को bast हासिल गर्न सक्षम सम्भव परिणाम.
एक दांत उपचार पछि खाद्य पदार्थ staining लागि बाहिर हेर. तिनीहरूले दागरहित बनाइन्छन् गरिएको गरेपछि आफ्नो दाँत दाग हुनेछ थप सजिलै. दांत पछि, रंग मा गाढा छ कि खाना र पेय टाढा रहन प्रयास. किनभने यो आफ्नो दाँत को शीर्ष तह मा प्राप्त र आफ्नो मुस्कान को चमक कम गर्न सक्छ विशेष कफी.
टिप! प्राकृतिक दाँत whitening, लागि जैविक नरिवल तेल प्रयोग. दैनिक वरिपरि दस मिनेट को लागि आफ्नो मुख वरिपरि तेल Swishing प्रभावकारी आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ.
कागति र सुन्ताला भिटामिन सी को एक अद्भुत स्रोत हो, तर तिनीहरूले पनि आफ्नो दाँत सेतो गर्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरूलाई Whiter प्राप्त गर्न आफ्नो दाँत मा रगडना एक कागति वा सुन्तला बोक्रा को भित्र दल्नु प्रयास. तपाईं पनि देखिने परिणाम बढाउन गर्न peels गर्न नुन को एक सानो बिट थप्न सक्छ यो विधि प्रस्तुत हुनेछ.
आफ्नो दाँत ब्रश बेकिंग सोडा उपयोग. स्वाभाविक आफ्नो दाँत सेतो गर्न, बेकिंग सोडा चमत्कार काम गर्दछ. बेकिंग सोडा प्रयोग गर्दा बिस्तारै माझ निश्चित हुनुहोस्, यसलाई केही मानिसहरू लागि मसूडों बढन सक्छ.
टिप! एक घर whitening, टूथपेस्ट प्रयोग पेरोक्साइड र बेकिंग सोडा बराबर भागहरु मा मिश्रित बनाउन. अप गर्न दस मिनेट आफ्नो दाँत माझ्छु यो मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस्.
तपाईं सेतो दाँत प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भनेर पहिलो कुरा नियमित दन्त cleanings उपस्थित छ. आफ्नो दाँत हरेक छ महिना साफ र आफ्नो वर्तमान सफाई लागि कार्यालयमा गर्दा आफ्नो भविष्य नियुक्ति बनाउन.
पानी धेरै पिउने आफ्नो दाँत सेतो राख्न मदत गर्न ठूलो प्रविधी छ. पर्याप्त पानी पिउने आफ्नो मुख कुल्ला हुनेछ, आफ्नो दाँत मा निर्माण देखि दाग रोकेको. यो पानी पिउन राम्रो अभ्यास छ, विशेष गरी समयमा र भोजन पछि.
टिप! आफ्नो दाँत Whiter हेर्न चाहनुहुन्छ? एक स्याउ खान. स्याउ धेरै घर्षण छन् र तिनीहरूले आफ्नो दाँत को तामचीनी गर्न कुनै पनि क्षति कारण बिना चाँडै आफ्नो दाँत सफा गर्नेछ.
स्वस्थ खाद्य पदार्थ खान; फल वा तरकारी जस्तै कच्चा पदार्थ तपाईं Whiter दाँत हेर्न चाहनुहुन्छ भने. आफ्नो दाँत स्वस्थ रहन मदत गर्न सबै सम्भव गर्दा यस्तो खाद्य पदार्थ जोगिन प्रयास. तपाईं आफ्नो मुस्कान उज्ज्वल राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि धेरै snacking हुँदैन.
तपाईं कुनै पनि गाढा तरल पिउने गर्दा एक पराल प्रयोग. एक पराल यसलाई दाँत दाग आफ्नो पेय लिन्छ समय घट्दै द्वारा दाँत whitens. को तामचीनी संग न्यूनतम सम्पर्क घाँटी तल सीधा जा र गरेर, त्यहाँ कम staining र discoloration छ.
टिप! तपाईं प्रक्रिया दांत एक दाँत undergo पछि, यो तपाईं मात्र कम्तिमा तीन चार दिनको लागि स्पष्ट तरल पिउन महत्त्वपूर्ण छ. यी प्रारम्भिक दिन, गाढा पेय पदार्थ गर्न फल देखि रंग को सबै प्रकार आफ्नो दाँत मा अवशोषित गर्न सक्छन्.
भने तपाईंको मुख मा crowns छन्, आफ्नो दाँत सेतो सक्छ; तर, आफ्नो crowns नै रंग रहनेछ.
यदि गति र प्रभावकारिता आफ्नो शीर्ष दाँत-दांत प्राथमिकता हो, ASAP आफ्नो दन्त चिकित्सक आफैलाई प्राप्त. त्यहाँ दाँत whitening, तपाईं को लागि प्रदान गर्न सक्छन् धेरै फाइदा छन्, हुनत यो पनि राम्रो तरिकाले नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ. यो तपाईं आफ्नो दाँत सेतो गर्न प्रयास गर्नु अघि आफ्नो दन्त चिकित्सक परामर्श बुद्धिमानी हुन्छ, तिनीहरूले स्वस्थ छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न, र दाग जन्माउने समस्या कारण भइरहेको छैन. यो सुरक्षित प्ले; आफ्नो दन्त चिकित्सक मदत तपाईंको दाँत दांत को लागि एक स्वस्थ र प्रभावकारी योजना सेट अप.
टिप! तपाईं धूम्रपान भने, आफ्नो दाँत दांत लागि आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण बानी अप दिने छ. यो तपाईं धूम्रपान जारी यदि उत्पादनहरु दांत दाँत पैसा खर्च गर्न व्यर्थ छ.
प्रत्येक भोजन पछि आफ्नो दाँत लिंदा तिनीहरूलाई दाग देखि राख्न मदत गर्नेछ. यो कफी आउँदा यो निश्चित साँचो छ.
आफ्नो दाँत लिंदा तिनीहरूलाई जोगाउँछ. राम्रो टूथपेस्ट छान्नुहोस्, cavities झगडे भनेर र एक सेतो दाँत मद्दत गर्छ. त्यहाँ विभिन्न ब्रान्ड, त्यसैले तिनीहरूलाई अनुसन्धान तपाईं आफ्नो दाँत लागि काम गर्दछ एक पाउन मदत गर्न सक्छ.
टिप! तपाईं निकट भविष्यमा तार ब्रेसहरू रही मा योजना भने, एक सिफारिस प्रक्रिया सुरु हुनुअघि तपाईं आफ्नो दाँत सेतो छ. तपाईं यो सल्लाह लिन भने, तपाईं मात्र straighter छन् कि दाँत संग समाप्त हुनेछ, तर Whiter साथै.
खानेपानी अक्सर Whiter दाँत तपाईंलाई मदत गर्नेछ. पानी संग आफ्नो दाँत Rinsing पनि दाँत discoloration पैदा गर्न सक्छ कणहरु टाढा धुन सक्छन्. यसलाई आफ्नो भोजन संग र भोजन समयमा पानी पिउन एक बानी बनाउन.
mouthwash प्रयोग अन्त्य. आफ्नो जीवनको बाहिर mouthwash काटन सेतो दाँत कायम तपाईंलाई भइरहेको विवादहरूको समाधान हुन सक्छ. Mouthwash अप धेरै हानिकारक रसायन बनेको छ. यी रसायन केही दाग ​​र आफ्नो दाँत discolor गर्न सक्नुहुन्छ.
टिप! दाँत सेतो रहन मदत गर्ने एउटा तरिका धेरै शीतल पेय पिउन छैन छ. शीतल पेय discolors र दाग दाँत कि रंग समावेश.
खानाको पछि पनीर खाने आफ्नो दाँत को खनिज सामग्री मदत गर्न सक्छ. अनुसन्धान क्याल्सियम आफ्नो दाँत पुनर्निर्माण गर्ने मौका इनामेल दिन्छ भनेर देखाउँछ.
एक उत्कृष्ट दाँत दांत टिप ओखर रुखकोबोक्रा प्रयोग गर्न छ. दाँत गर्न छाल यस प्रकारको व्यवहारमा उतार्नु ठूलो whitening, प्रभाव उत्पादन, र यो पनि गहिरो सफाई प्रदान. तपाईं आफ्नो मुख बाहिर कुल्ला गर्नुपर्छ र राम्ररी छाल प्रयोग पछि आफ्नो दाँत माझ्छु.
टिप! बेकिंग सोडा गर्दा पेरोक्साइड संग मिश्रित पनि आफ्नो दाँत whitens एक बिस्तारै घर्षण टूथपेस्ट रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो हानिकारक रसायन बिना brighter दाँत लागि यो मिश्रण प्रयोग गरेर आफ्नो दाँत माझ्छु.
एक कमी संग खाद्य पदार्थ खाने धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ. खाद्य पदार्थ, गाजर लाठी र स्याउ जस्तै, आफ्नो दाँत Whiter राख्न मदत. तपाईं चपाउनु गर्दा crunchy छन् कि खाद्य पदार्थ आफ्नो दाँत सफा गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो सारा अवस्थामा तिनीहरूलाई उपभोग गर्न हेरविचार, बरु slicing वा तिनीहरूलाई dicing भन्दा.
टिप! थप डेयरी खाद्य पदार्थ खान. पनीर जस्तै कुराहरू, दूध र दही बलियो योगदान भनी मा पोषक छ, स्वस्थ-देख दाँत.
तपाईं कुनै पनि whitening, प्रणाली मात्र प्राकृतिक दाँत मा काम गर्दछ गर्नुपर्छ. तपाईं यस्तो veneers रूपमा दन्त काम छ भने, veneers, आफ्नो मुख को सामने crowns वा fillings, तिनीहरूले रंग परिवर्तन छैन. आफ्नो प्राकृतिक दाँत Whitening दन्त काम दुखेको औंठी जस्तै बाहिर छडी सक्छ.
आफ्नो दाँत सेतो गर्न एक saltwater मिश्रण प्रयास. एक कप पानी आधा चम्मच रक नुन मिश्रण र यसको बारेमा पाँच मिनेट लागि त्यहाँ बस्न छ. को नुनीन पानी कुल्ला गर्नु, बरु mouthwash को. यो प्रविधी ब्याक्टेरिया कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ आफ्नो मुख मा cavities को मात्रा सीमित गर्न.
टिप! विभिन्न फल स्वाभाविक आफ्नो दाँत Whiter बनाउन एक सुरक्षित र प्रभावकारी तरिका प्रदान. जस्तै, स्ट्रबेरी धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ.
जब ट्रे राम्ररी फिट छैन, रसायन सजिलै गम क्षेत्र असर र जलन वा सुनिंनु हुन सक्छ.
त्यहाँ एक भाग्य खर्च छैन भनेर आफ्नो दाँत सेतो र रोशन गर्न धेरै सुरक्षित र सजिलो तरिका हो. एक ठूलो विधि बेकिंग सोडा प्रयोग लागू गर्न छ. त्यहाँ बेकिंग सोडा जो तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुन्छ समावेश टूथपेस्ट छन्, वा घर मा आफ्नो अल्मारी मा सामान प्रयोग.
टिप! सिगार वा चुरोट धूम्रपान मा भाग लिन छैन. यी दाँत discoloration कारण हुनेछ.
जबकि दांत टूथपेस्ट अन्य दांत विधिहरू शक्ति कमी, तिनीहरूले रोक्न सक्छ वा प्राप्त नयाँ दाग छुटकारा. यी टूथपेस्ट को तामचीनी बिगार्न छैन भन्ने एक सिलिका घर्षण प्रयोग.
तपाईं आफ्नो दाँत माझ्छु केही नुन प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्. एक सरल, अहिलेसम्म आफ्नो दाँत दांत गर्न प्रभावकारी चाल नुन संग लिंदा छ. प्रत्येक लिंदा पछि राम्ररी आफ्नो मुख कुल्ला गर्नुपर्छ. किनभने यो घर्षण छ, गर्छन् नुन संग लिंदा संग दूर प्राप्त छैन.
टिप! भोजन पछि, तपाईंको मुस्कान जोगाउन कक्षा जस्तै दांत गम चपाउनु. गम को केही प्रकारका आफ्नो दाँत सेतो गर्न formulated छन्.
तपाईं माझ गर्नुपर्छ, साथै एक गम मालिश लागू. तपाईंको मुस्कान सुनिश्चित गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका रहन्छ सेतो बस माझ र खाने पछि floss छ. तिनीहरू निर्माण र कुनै पनि क्षति अघि यो तपाईं खाना अवशेषहरु र पट्टिका को छुटकारा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ.
तपाईं आफ्नो दाँत माझ्छु गर्दा एउटा केरा बोक्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो अधिकांश मानिसहरू काम कसम एउटा सरल विधि हो. तिनीहरूलाई लिंदा अघि केले बोक्रा संग आफ्नो दाँत भन्दा RUB. त्यसपछि तपाईं दाँत तपाईं सधैं के भन्ने यस्तै माझ. तपाईं आफ्नो दाँत मा तत्काल परिणाम देख्नु हुनेछ.
पहेंलो दाँत एक व्यक्ति धूम्रपान भनेर कसैले एक सजिलै सजिलै देखिने चिन्ह छ. यो बेला तपाईं धूम्रपान एक उज्ज्वल सेतो राख्न गाह्रो हुन सक्छ. यदि तपाईं धूम्रपान पर्छ, कम एक सानो धूम्रपान गर्ने प्रयास त तपाईं बढी स्वस्थ हुन सक्छ र राम्रो दाँत देख छ.
आफ्नो दाँत Whitening ठूलो तरिका शाब्दिक राम्रो गर्न आफ्नो जीवनको गुणस्तर छ. Whiter दाँत मात्र तपाईं अधिक आकर्षक बनाउँछ; यो तपाईं समाजमा थप विश्वस्त हुन मदत गर्छ. के तपाईं बाहिर प्राप्त गर्न थप इच्छुक छन् र अन्य व्यक्तिसँग कुरा गर्न भनेर पाउनुहुनेछ. आफ्नो परिणाम विस्तार गर्ने यी सुझावहरू लागू, र चाँडै र afforadably तिनीहरूलाई हासिल.
सेतो दाँत गाइड पोस्ट - जुन 5, 2016 12 मा:32 AM
विभाग: घर आधारित सेतो दाँत गर्न ट्याग: सौन्दर्य मुस्कान, तपाईंको मुस्कान को चमक, आफ्नो दाँत सेतो, तपाईंको दाँत सजिलो सेतो, आफ्नो दाँत दांत